Ezigbo amụma amụma ịhazi 2015 | Martech Zone
Ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna ugbu a! Nke a bụ ndepụta siri ike nke ebe 10 na-elekwasị anya na ndị na-ere ahịa kwesịrị iche banyere.
Ikwesiri ima ebe igbunye otutu ego ahia gi, dabere na uzo ndi ahia gi na olile anya gi na eme. Ya kpatara Ndị na-enye ndụmọdụ gbasara Whelọ gbalịrị ime ka infographic a dị ka oke dị ka o kwere mee, na-ekwu okwu site na Email Marketing, iji duga ntughari, na nyiwe akpaaka.
10 Nkwupụta Ahịa maka 2015
Ọ gara n'ihu na-ewu ewu na ahịa ahịa.
Ojiji nke ahịa data.
Mụbaa n’ime mkpọtụ ahịa.
Ibelata ezipụ ndị ọbịa.
Nkuchi nke video.
Mụbaa n’ime nweta ngwanrọ ahịa ahịa.
Micro ezubere iche na hyper-nkewa.
Mụbara elekwasị anya na mobile.
Increba n'ịntanetị Mgbasa ozi.
N'ezie, ihe ndị a niile na-egosi mkpa ọ dị ịdị na-arụ ọrụ nke ọma site na mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa - a ga-eji dochie mmefu mmefu sara mbara site na itinyekwu arụmọrụ, nke ka mma, nke ọma. Ngwaọrụ na nyiwe iji nyere gị aka nyocha, itinye, na-akpaghị aka ma na-atụle nzaghachi gị kwesịrị ịbụ akụkụ nke azụmaahịa gị niile.
Tags: Mgbasa ozicontent Marketingezipụ ndị ọbịahyper-nkewainfographicahịa datamkpọtụ ahịanweta ngwanrọ ahịa ahịamicro-ezubere icheahịa efumgbasa ozi n'ịntanetịahịa vidiyondị ndụmọdụ wheelhouse